Dowladda Federaalka oo Ciidamo ku Daabulaysa Degmooyin ka tirsan Gobalka Gedo - Awdinle Online
Dowladda Federaalka oo Ciidamo ku Daabulaysa Degmooyin ka tirsan Gobalka Gedo
January 26, 2020 (AO) – Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in dowladda Federaalka ay labadii maalmood ee la soo dhaafay ay u daabushay Ciidamo gaaraya in ka badan boqol askari, kuwaasoo laga dejiyay degmada Luuq.
Gudoomiye kuxigeenka Gobalka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq Al-Qaadi ayaa sheegay in dowladdu ay ciidamo ka dejisay Luuq, isagoo uga digay dowladda inay ka huriso gobolka geliso dagaal dhiig ku daata.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada la geynayo Gobalka Gedo ay gadaal ka riixayaan labo nin oo ka tirsan Nabadsugida Soomaaliya oo uu magacyadooda ku sheegay C/llaahi Kulane oo ah Kaaliyaha Taliyaha NISA.
Dowladda Federaalka ayaa horay ugu guuldareystay isku day ay dooneysay inay Ciidamo Itoobiyaan ugu adeegsato doorashadii Madaxweynaha Jubbaland ee mar kale dib loogu doortay Axmed Madoobe, waxaana haatan socda qorshe kale oo Maamulka Jubbaland looga goynayo Gobalka Gedo.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay wado qorshaha Gobolka Gedo looga madax bannaaneynayo Maamulka Jubbaland, iyadoo ujeedka laga leeyahay qorshahan uu yahay doorashada soo socda ee Xildhibaannada Federaalka ka imaanaya Gedo inay dowladdu maamusho.
Xigasho Jowhar News
Previous articleSaudi Arabia to Stop Funding Mosques in Foreign Countries
Next articleSomaliland iyo Puntland oo ku Loolamaya Sheegashada Taariikhda Halgankii Dheeraa ee Daraawiishta